Otu akwụkwọ nkà ihe ọmụma n'ihi na otú iji tọgharịa iPhone: na / enweghị iTunes / iCloud / Computer
Ọ bụla iPhone nwere ike congeal ma ọ bụ mkpa ka a maliteghachiri iji arụ ọrụ nke ọma. Ọ bụrụ na ị na-ahụ na gị iPhone rụrụ ọzọ na ndị ọzọ ji nwayọọ nwayọọ na, n'ihi na n'aka, i kwesịrị iji tọgharịa ya. N'ezie na e nwere ihe abụọ na ụdị resets maka iPhone: ike nrụpụta na juu nrụpụta (maka ozi ndị ọzọ, biko gụọ ike tọgharịa vs. adụ nrụpụta). Ụfọdụ ndị na-amaghị banyere Usoro okwu, ma chọrọ iji tọgharịa iPhone si iTunes, tọgharịa iPhone si iCloud ma ọ bụ tọgharịa iPhone enweghị kọmputa. Nke a bụ ebe isiokwu a si abịa. Mụta ihe nkọwa:
Part 1. Tọgharia iPhone na iTunes
Part 2. Olee iji tọgharịa iPhone on iPhone Kpọmkwem
Part 3. Tọgharia iPhone na iCloud
Part 4. Tọgharia iPhone na Wondershare SafeEraser (ndị kasị dịrị nchebe ụzọ ma ọ bụrụ na ị na-aga na-ere ma ọ bụ na-enye gị iPhone pụọ)
Nzọụkwụ 1. Gbakwunye gị iPhone na kọmputa na ẹkedori iTunes.
Nzọụkwụ 2. Pịa gị iPhone na n'aka ekpe menu na iTunes.
Nzọụkwụ 3. Akọrọ na weghachite button na-amalite resetting usoro. iTunes ga-mkpa ị n'ịkwado edinam. Dị nnọọ pịa Weghachi iji gosi ya. Ọ pụrụ ewe gị a nkeji ole na ole rụchaa usoro. Adịghị Kwụpụ iPhone ofụri a usoro!
Nzọụkwụ 4. Mgbe dechara, iTunes ga ase ma ọ bụrụ na ị chọrọ iweghachi gị iPhone si a ndabere faịlụ. Họrọ a na-adịbeghị anya ndabere ka weghachi. Ọ bụrụ na ị na-aga na-ere gị iPhone, ị ga-ahọrọ "Mee elu dị ka a ọhụrụ iPhone".
Iji hụ na ọ bụghị adịkwa ọ bụla gị iPhone data, tupu resetting gị iPhone, biko ndabere gị iPhone ka iCloud. N'okpuru ebe a bụ iji tọgharịa iPhone na na ngwaọrụ gị.
Nzọụkwụ 1. Kpatụ Ntọala ngwa gị iPhone, na ịnyagharịa General> Tọgharia> Ihichapu ọdịnaya niile na Ntọala.
Nzọụkwụ 2. Kwenye gị edinam na ka gị niile data na gị iPhone ga ehichapu ya. Usoro a pụrụ a nkeji ole na ole.
Nzọụkwụ 3. Mgbe ahụ, na-eso Mbido nnyemaaka ịhọrọ a na-adịbeghị anya iCloud ndabere na ị na mere iji weghachi gị iPhone. Site n'ime nke a, ị ga-ghara ida gị iPhone data. N'ezie, ọ bụrụ na ị na-achọghị ka matain ọ bụla ochie data na gị iPhone, ị ga-eguzobe ya dị ka a ọhụrụ iPhone. Ọ dịzịrị gị.
iCloud dị na-eji iji tọgharịa gị iPhone. Iji ya, ị kwesịrị ị mbụ gbanye Chọta My iPhone na gị iPhone (pịa Ntọala> iCloud, pịgharịa gaa na ala ma mee ka Chọta My iPhone). Na mgbe ahụ iji kọmputa gị iji tọgharịa iPhone na iCloud.
Nzọụkwụ 1. Open webpage - icloud.com ma họrọ Chọta My iPhone.
Nzọụkwụ 2. Na ọhụrụ mmapụta window, pịa All Devices. Chọta gị iPhone ma họrọ ya.
Nzọụkwụ 3. E nwere 3 nhọrọ dị: Play Sound, Lost ọnọdụ ma ọ bụ ihichapu iPhone. Họrọ ihichapu iPhone ka ya na ụlọ ọrụ ntọala. Mgbe e mesịrị i nwere ike iweghachi gị iPhone na iCloud ndabere ma ọ bụ ka ọ dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ.
Part 4. Tọgharia iPhone na Wondershare SafeEraser
Ọ bụrụ na ị zuru ike gị iPhone ukwuu n'ime n'ihi na ị chọrọ ka ihichapu niile onye data tupu enye pụọ ma ọ bụ na-ere gị iPhone, mgbe ahụ, i kwesịrị iji Wondershare SafeEraser. Ọ ga-ihichapu niile data na gị iPhone na ịtọ gị iPhone dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ. Ọ dịghị onye data ga-natara site gị iPhone, ọbụna Wondershare Dr.Fone maka iOS ike. Nke a ndị kasị dịrị nchebe ụzọ iji tọgharịa iPhone dị ka a ngwaọrụ ọhụrụ. N'okpuru ebe a bụ nzọụkwụ:
Nzọụkwụ 1. Download software na wụnye ya na kọmputa gị. Ẹkedori ya na jikọọ na gị iPhone gị na kọmputa site na eriri USB.
Nzọụkwụ 2. Họrọ "ihichapu niile data na ngwaọrụ" na nche larịị ị na-ahọrọ.
Nzọụkwụ 3. Malite ihichapu gị iPhone.
> Resource> iTunes> Họrọ Your achọsi Ike Ụzọ Tọgharia iPhone: Na iTunes ma ọ bụ iCloud